Aluminium Saw Blade, PCD Saw Blade, Diamond Saw Blade - umKheni
Ucingo: +86 13924558963
Foshan umKheni Cutting Ithuluzi Co., Ltd. kuyinto nomkhiqizi professional ingxubevange kanzima babona isiyingi izindwani. We khiqiza isiyingi babona izindwani nge eliphezulu babona blade imishini ukukhiqizwa, ingxubevange Luxembourg hard nesiJalimane 75crL steel plate kanye nezinye izinto eliphezulu. UmKheni ikakhulu ukhiqiza isaha izindwani, aluminium ahlabayo isaha izindwani, steel cutting isaha izindwani, multi-blade babona blade, kanzima ukhuni ahlabayo isaha izindwani, ipulangwe ahlabayo isaha izindwani, ukuzisika metal isaha izindwani, acrylic ahlabayo isaha izindwani futhi okungezona ezijwayelekile isaha izindwani, okuyinto kabanzi ifenisha, aluminium kanye hardware umkhakha.
UmKheni aluminium isaha izindwani zenziwa aluminium amazwe, okuyinto isikhathi eside futhi nge ukusebenza kahle eliphezulu. Yonke imikhiqizo yethu kuveza isaha yokwehlisa kanye luze brushless. Isicelo: umnyango, window, isihenqo udonga aluminium, aluminium induku, aluminium iphaneli, aluminium izimboni, aluminium ultra-nomzimba omncane, aluminium ifenisha, ukushisa echibini nokunye.
Zabasebenzi bokhuni Saw blade
Woodworking umKheni isaha izindwani abenziwe eliphezulu ingxubevange futhi base, ezithinta izici ahlabayo okusezingeni eliphezulu ngokunemba, asikwe kahle, cut bushelelezi, umsindo ongaphakeme futhi isikhathi eside ekuphileni. Isicelo: kukakhokho ezomile, izinkuni hard, MDF, ipulangwe, panel izinkuni-based, panel of impahla kanye bamboo imikhiqizo ehlukene.
Ukulungele ukudala Haas isigayo yakho entsha mpo?
Ase sitfole umshini esifanele esitolo yakho, futhi yenze eyakho ngokungeza izinketho netimphawu ukuthi umsebenzi ngawe.
Amadivayisi: Cha 2, Industrial Road, Bijiang Industrial Zone, Beijiao Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, China